Ukhala ngefu elimnyama kwiPirates | News24
Ukhala ngefu elimnyama kwiPirates
Durban - Ingwazi ye-Orlando Pirates idonse ngendlele abadlali bale kilabhu wathi kumele bakhohlwe yifu elimnyama elibagubuzele kule sizini uma sebebhekene neSuperSport United kowamanqamu weNedbank Cup ngoMgqibelo ngo-20:15 eMoses Mabida Stadium eThekwini, kubika ILANGA.
U-Edward ‘Magents’ Motale owayengukaputeni weBhakabhaka ngesikhathi inqoba iCaf Champions League ngo-1995, uthi iNedbank Cup iyithuba labadlali lokugudluza ifu ebeligubuzele le kilabhu ehluleke ukuqeda kwi-top 8 okokuqala ngqa selokhu kwasungulwa iPSL ngo-1996.
UMotale ubevakashele igatsha leNedbank elisenkabeni yeTheku ngenhloso yokungqungquzela umphakathi ukuba uyokweseka umdlalo wamanqamu.
Ubehambisana noThabo September obegijima kwiSuperSport United. USeptember useyinxusa leSuperSport United futhi usengene kwezamabhizinisi.
OLUNYE UDABA: IChippa ezinhlelweni zokudayisa isihlabani
UMagents uthi ubona iBhakabhaka inethuba elingcono lokuhamba nale nkomishi njengoba ingakawini lutho.
“Le nkomishi isibhalwe igama leBhakabhaka, konke sekusele kubadlali manje. Kumele baqikelele ukuthi kabawavuzisi amagoli ngemizuzu yokuqala ngoba bazosuke baxhamazele.
“Uma umqeqeshi ezoqinisekisa ukuthi luqinile ngokwanele udonga, nakanjani izolala ekhabetheni lethu le nkomishi. ISuperSport ikhathele njengoba ibidlala neTP Mazembe koweCaf Confederations Cup,” esho.
Uthi abadlali bePirates kumele bakhohlwe ukuthi babe nesizini engeyinhle. “Ukunqoba le nkomishi kuzokwenza sikugubhe kahle ukuhlanganisa iminyaka engu-80 kwasungulwa le kilabhu.”